बौद्ध धर्मदर्शनको यात्रा - Vishwanews.com
बौद्ध धर्मदर्शनको यात्रा
आचार्य पीपलमणि सिग्देल, न्यूयोर्क
आज विश्वमा मौलाएको बौद्ध धर्मको स्थापना गौतम बुद्धले गर्नुभएको हो । बौद्धहरूको विश्वासअनुसार शाक्य–मुनि अन्तिम बुद्ध हुनुहुन्छ । अनेक जन्मसम्म पारमिताहरूको अध्ययन गरेर उहा“ले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको मानिन्छ । बौद्धहरूको विचारमा उहा“भन्दा पहिले करिब २३ जना बुद्धहरूले बुद्ध धर्मको भिन्न–भिन्न कालमा प्रचारप्रसार गरेका थिए । नेपालको प्राचीन कौशल जनपदको मुख्य नगर कपिलवस्तुमा शाक्यहरूको गणराज्यमा बुद्धको जन्म भएको हो । ५०५ वि.पू. वैशाख पूर्णिमाको दिन जन्मिएपछि बुद्धको आमाको मृत्यु भयो । बुद्धको लालनपालन सौतेनी आमाले गरिन् । १९ वर्षको उमेरमा यशोधरासँग विवाह भयो र राहुल नामक पुत्र जन्मियो । राजसी भोगमा रहँदा शिद्धार्थको चित्त वैराग्यतर्फ उन्मुख भयो । घुम्न गएको बेलामा देखिएका वृद्ध, मृतक, रोगी र सन्यासी देखी शिद्धार्थले गृहत्याग गर्नुभयो ।
शिद्धार्थको मस्तिष्कमा मानिस किन वृद्ध हुन्छ, किन रोगी हुन्छ र किन मृत्यु प्राप्त गर्दछ, के यो दुःखबाट मुक्ति सम्भव छैन भनेर सोच्न थाल्नुभयो । अन्त्यमा उहाँको वैराग्यता बढ्न थाल्यो र ज्ञानको खोजीमा गृहत्याग गर्नुभयो । त्यसपछि ६ वर्षसम्म कौशल तथा मगधका जंगलमा उपयुक्त गुरूको खोजीमा घुम्न थाल्नुभयो । त्यसै क्रममा आराडकलाम र उद्दकरामपुत्त नाम गरेका विद्वानसँग साक्षात्कार हुन गयो । पछि केही ज्ञान लिएर सिद्धार्थ तपस्यामा लाग्न थाल्नुभयो । लामो समयसम्म आहार–विहार त्याग गर्दा उहाँको शरीर अत्यन्त क्षीण भयो तर ज्ञान प्राप्त भएन । त्यसपछि शिद्धार्थले त्यो मार्गलाई छोडेर आहार गर्दै चिन्तन मनन गर्न थाल्नुभयो । त्यसै क्रममा उहाँले गयाको उरूबेला नाम गरेको स्थानमा सत्यको साक्षात्कार गर्नुभयो । त्यस दिनदेखि उहाँलाई बुद्ध भन्न थालियो । आध्यात्मिक जगतको यो महत्वपूर्ण घटना ४७१ वि.पू. वैशाख पूर्णिमाको दिन भएको हो । त्यतिबेला सिद्धार्थ ३५ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि त्यसै वर्ष आषाढ पूर्णिमाको दिन काशी नजिकै सारनाथ भन्ने स्थानमा गएर कौण्डिन्य आदि पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको प्रथम उपदेश दिनुभयो । यसैलाई बौद्ध साहित्य र परम्परामा प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन भनिन्छ ।
बुद्धले बोधि प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि तपस्या गर्दा साथ दिएका पाँच जना ब्राम्हणहरूलाई बुद्धले आफूले जानेको ज्ञान सर्वप्रथम दिनुभएको थियो । त्यसैले भिक्षु संघ गठन हुँदा सबभन्दा पहिला संघको सदस्यहरू यिनीहरू नै थिए ।
बुद्धको उपदेशबाट सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त गर्ने कौडिन्य थिए । सारनाथमा बुद्धले धर्म सिकाउन सुरु गरेपछि यी पाँचै जनाले ज्ञान प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि यिनीहरूले बुद्धका उपदेशहरूको प्रचार–प्रसार गर्दै भिक्षु संघलाई फैल्याउँदै गए ।
कामवासनाको रसमा लाग्नु हीन कर्म हो र मुर्खमानिसहरूको काम हो । यसलाई श्रेष्ठ मान्ने व्यक्ति अनर्थ दुःख कष्टबाट घेरिन्छ । यो कार्य ब्रह्मचर्यका लागि पनि हुँदैन र वैराग्यका लागि पनि हुँदैन । दुःख निरोध गर्न र दिव्यज्ञान प्राप्त गर्नमा यसले असहयोग गर्दछ । सम्बोधि र निर्वाण प्राप्तिमा पनि यसले असहयोग गर्दछ ।
अर्को आङ्खनो कार्यलाई अत्यन्त पीडा दिनु पनि हो । यो कार्य पनि दुःखदायक छ । अनर्थले युक्त छ । यस जन्ममा दुःख दिनाले यसको फल अर्को जन्ममा दुःख नै प्राप्त हुन्छ । त्यसैले तथागत बुद्धले मध्यम प्रतिपदले युक्त धर्मको उपदेश गर्नुभएको हो । जसमा सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि समाविष्ट गरिएका छन् ।
आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका बोधक सम्यक सम्बुद्ध भगवानले प्रतिपादन गर्नुभएको मार्गको नाम “मध्यम प्रतिपद” या मध्यम मार्ग ( त्जभ mष्ममभि उबतज० हो । भगवान बुद्ध जुन धर्मचक्रप्रवर्तन गर्नुभयो या जुन मार्गको उपदेश दिनुभयो त्यो नै मध्यम मार्ग हो । परस्पर दुई वटा अति र अन्तको निषेध गरेर भगवान् बुद्धले यसको उपदेश गर्नुभएको हो । मनुष्यको चञ्चल स्वभाव अनुसार ऊ कुनै अन्तमा पतित हुन्छ र त्यसलाई आङ्खनो आग्रह बनाएर त्यसप्रति आग्रहशील हुन्छ । यही आग्रहशीलता नै सम्पूर्ण मानवीय विभेद, संघर्ष र दुःखहरूको मूल हो । मध्यम प्रतिपद यी सबै दुःखहरूबाट पार पाउने सर्वोत्तम राजपथ हो । यसद्वारा नै मानिस दुःखबाट मुक्त भई निर्वाण प्राप्त गर्दछ । राजनीतिक, ऐतिहासिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि यसले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । अति सुखसयल पूर्वक जीवन बिताउनु एउटा अन्त हो । जसलाई “काम सरवल्लिकानुयोगः” भनिन्छ । कष्टदायक जीवन बिताउनु अर्को अन्त हो जसलाई “आत्मकलमथानुयोगः” भनिन्छ । भगवान बुद्धले मध्यममार्गको सहायताबाट निर्वाण प्राप्त गर्नुभएको थियो । यसै मार्गको कारणले बौद्धमत विश्व जगतमा अधिक प्रसिद्ध पनि छ ।
भगवान बुद्धले दुःख निरोधगामी मार्गमा नियम बताउनुभएको छ । त्यस नियमलाई अष्टाङ्गिकमार्ग भनिन्छ, ती मार्गहरू यस प्रकार छन् ।
१) सम्यक संकल्प २) सम्यक दृष्टि ३) सम्यक आजीव ४) सम्यक समाधि ५) सम्यक श्रुति ६) सम्यक स्मृति ७) सम्यक कर्मान्त ८) सम्यक ज्ञान
बुद्धको उपदेशमा हिंसाको विरोध छ । बुद्धको विचारमा प्राणी त्रिताप बाट बच्नुपर्छ । त्यसै गरी आस्तेय ( चोरी नगर्नु ) को पनि उपदेश छ । यसरी बुद्धको समग्र सिद्धान्तलाई विचार गर्दा उहा महामानव देखिनुहुन्छ र यसलाई अनुशरण गर्ने व्यक्ति मानवतावादी र प्राणी हितकारी बन्न सक्छन् । क्लेशहरू निभ्नु नै निर्वाण हो । क्लेशहरू भन्नाले रोग, द्वेष, मोह भन्ने बुझिन्छ । यी क्लेशहरू नाश भएको वा निभेको अवस्था नै निर्वाण हो । क्लेशको ज्वरो शान्त अवस्था नै निर्वाण हो । निर्वाण अमृत पद हो । तर्कले यसको पूर्ण वर्णन गर्न सकिन्न । साधनबाट व्यक्तिले निर्वाणपदको अनुभव गर्न सक्छ । सम्बोधिको सन्दर्भमा निर्वाणलाई अतकर्य धर्म भनिएको छ र यसलाई सर्व संस्कार समर्थ, सर्वोपाधिप्रति निस्सर्ग, तृष्णा, क्षय, विराग, निरोध भन्ने गरीन्छ । यसरी विषय प्रतिपादन गर्दै बौद्ध धर्मदर्शन अघि बढेको पाइन्छ ।